SOMALI BELIEVERS FELLOWSHIP - Bible Study
Nuux iyo Aaminimada Ilaahay﻿
Bilowgii 8, 9
​Casharkan, qorsheheenu waa inaynu dhammayno qisadii nebigii Ilaahay ee Nuux. Marka hore aynu nakhtiino wixii aynu hore ugu soo barannay labadii barnaamij ee ku saabsanaa Nuux iyo daadkii weynaa. Cutubka lixaad ee kitaabka Bilowgii, waxaynu ku soo aragnay inuu sharkii bini'aadanku aad u weynaa berigii Nuux noolaa; damac kasta oo qalbiga bini'aadanka ka soo baxaa wuxuu ahaa shar. Taasina waa sababtii uu Ilaahay u go'aansaday inuu adduunka daad ku soo daayo si uu uga tirtiro dembiile kasta oo diidey inuu dembiyadiisa ka soo noqdo oo Ilaaha runta ah ee nool u soo laabto.
Nebi Nuux iyo Daadkii Weynaa﻿
​​Casharkeenkii ugu dambeeyey, waxaynu bilownay inaynu eegno qisadii cajiibka ahayd ee Nebi Nuux kaas oo noolaa toban farcan Aadan kaddib. Iyadoo lagu jiro wakhti fusuq iyo dembi miidhan ah, ayuu Nuux Ilaahay la socdey. Waxaynu soo aragnay sidii uuIlaahay qalbigiisu aadka u murugoodey dembiyada farcankii Aadan daraaddood. Qorniinku wuxuu odhanayaa, "Rabbiguna wuxuu arkay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka, iyo in male kasta oo fikirrada qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba." (Bilowgii 6:5). Waana sababtaa tii uu Ilaahay, cadhadiisa quduuska ah daraaddeed, u qorsheeyey inuu dembiileyaasha (bilaa towbadda ah) adduunka ka tirtiro.
Nebi Nuux: Dulqaadka iyo Cadhada Ilaahay
​Marka aynu dib u jaleecno Qorniinka Quduuska ah, waxaynu hore u soo aragnay in bilowgii, markii uu Ilaahay adduunka abuuray ay wax walbawanaagsanaayeen. Laakiinse, Aadan-kii aynu ka soo farcannay ayaa Ilaahay adeeci waayey, oo shar/dembi ayaa isaga dartii adduunka soo galay oo bini'aadanka oo dhan saameeyey, sida cudurrada faafa! Waxaynu kaloo soo aragnay inuu sharkaasi isla markiiba saameeyey labadii wiil ee Aadan dhalay, ee Haabiil iyo Qaabiil, iyo farcankoodii ka dambeeyeyba.
Haabiil iyo Qaabiil: Bilowgii Allabariga﻿
​Casharkeenii ugu dambeeyey ee barashada Towreedda, waxaynu ku soo aragnay in kaddib markii ay Aadan iyo Xaawa dembaabeen, uu Ilaahay bilaabay inuu ogeysiis ka sii bixiyo Qorshihiisii ahaa inuu adduunka u soo diro Mid, kaas oo carruurta Aadan ka samatabixin doona awoodda Shaydaanka iyo dembiga iyo cadaabta. Ilaahay oo keliya ayaa dembiga dembiileyaasha dabooli kara, sidaa daraadeed waxaynu soo aragnay inuu Ilaahay Laftiisu neef allabari ahaan u bixiyey oo uu haraggiisii iyaga dhar uga sameeyey si uu Aadan iyo Xaawa qaawanaantoodii ugu daboolo. Ilaahay ayaa allabarigii ugu horreeyey qalay. Waxaynu kaloo soo aragnay inuu Ilaahay sii sheegay inay adduunka ka jiri doonaan laba nooc oo dad ahi: kuwo diidi doona inay Erayga Ilaahay rumeeyaan iyo kuwo rumayn doona.
​Casharkeenii ugu dambeeyey, waxaynu ku soo aragnay sidii ay Aadan iyo Xaawa uga dheeraadeen Ilaahay kaddib markii ay geedkii uu Ilaahay ka xaaraameeyey cuneen. Sidaa daraadeen, dadkii uu Ilaahay u ekaanshihiisa ka abuuray, waxay doorteen inay Shaydaanka raacaan, oo Ilaahay cadow ku noqdaan. Tan aawadeed, Ilaahay wuxuu iyaga u sheegay wixii uu dembigu adduunka keeni dooney: dhibaato iyo silic, qodax iyo gocondho, xanuun iyo dhimasho. Dembigaas iyo cawaaqibkiisu kuma uu ekaan Aadan iyo Xaawa oo keliya e, wuxuu ku faafay oo saameeyey dhammaan bini'aadanka farcoonkoodii ah. Qorniinka quduuska ahi wuxuu odhanayaa:
Cawaaqibkii ka Dhashay Dembigii Aadan﻿
Innaga oo sii wadna barashadeenii Towreedda, xasuuso inaynu hore u soo barannay inuu Ilaahay imtixaan sahlan hordhigay Aadan, si uu u eego inuu isagu jacaylka ugu weyn Ilaahay u hayey oo diyaar u ahaa inuu Isaga adeeco. Ka hor intuusan haweeneydii abuurin, Ilaahay wuxuu Aadan ku amray, "Rabbiga Ilaah ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh, Geed kasta oo beerta ku yaal wax baad ka cuni kartaa: laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin: waayo, maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa." (Bilowgii 2:16, 17) Ilaahay wuu imtixaamay Aadan, oo wuxuu isaga uga digey in ciqaabta adeecid la'aantu dhimasho tahay, iyo Isaga oo uu ka dheeraado. Ilaahay wuu jeclaa Aadan oo wuxuu doonayey inay weligood xidhiidh fiican isla yeeshaan. Laakiinse, waxaynu cashar aynu hore u soo barannay ku soo aragnay inay Aadan iyo Xaawadhegeysteen shaydaankii oo Ilaahay ku dembaabeen kaddib markii ay cuneen geedkii uu Ilaahay ka xaaraameeyey.
Aadan iyo Xaawa iyo Beertii Jannada
W​axaynu sii wadnaa casharradeenii ku saabsanaa wixii bilowgii dhacay. Casharka maantuna wuxuu ku saabsan yahay Aadan iyo Xaawa.